York sarrifka Genesis helo BitLicense
Genesis Global Trading helay BitLicense ka New York ee gobolka Department of Financial Services (DFS), taas oo ka dhigaysa oo keliya shirkadda shanaad muddo saddex sano ah si aad u hesho liisanka muran.
Suuqa ayaa loogu talagalay raasamaalka sare iyo maal hay'adaha iyo dalabyo 24/7 ganacsiga ee Seeraar, Litecoin iyo kuwa kale.
network hillaac koraa more adag
network hillaac waxaa sii kordhaya. Tirada qanjidhada ayaa sii kordhaya saddexdii bilood ee la soo dhaafay, sida muujinayo garaafka oo is barbar February 2018 si May 2018.
model Tan waxay ku tusaysaa tirada qanjidhada oo noqdaan bartilmaameedsan karaa ama waxyeelleeyey iyo iska caabin lihida ee this, tilmaamaya % of network in weli noqon lahaa hawl-, muujinaya baahinta sii kordhaya ee lihida.
Loo dhanyahay waa shabakad hillaac ayaa koray oo hagaagay ka February si May.
Sberbank dhameystiraya macaamil bond ugu horeysay Russia ee isticmaalaya blockchain
bangiga Ruush Sberbank iyo isgaadhsiinta MTS adag ku qabtaa waxay dhihi waa horeysay macaamil bond ganacsi ee dalka ka dhigay isticmaalaya blockchain.
MTS dhawaaqay Talaadadii in ay kaalinta bonds ganacsi ee 750 million rubles ($12.11 million), helana hoose isagoo Sberbank, isticmaalaya madal blockchain lahaansho ay bixiyaan Depository u dejinta Qaranka.
Andrey Kamensky, Xigeenka Maaliyadda, maalgelinta iyo M&A at MTS, uga hadashay in macaamil ganacsi guul blockchain lagu qaaday iyada oo loo marayo “silsiladda dejinta oo dhan, meelaynta ammaanka iyo la helo lacag kaash ah si ay u dhammaystirka dhammaan waajibaadka Maal ah.”
Seeraar udhaqaajiyaa horjeeda ...
Post Next:Sidee mid saadaalin dhaqanka ee heerka of cryptocurrency ah marka la eego tirada amarada kaalinta?
host ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 22, 2018 at 1:50 AM
Madlyn Gallant ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 24, 2018 at 9:43 PM
Crypto ayaa sheegay in: